Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.4.1.2 Namana fiofanana eo amin'ny mpianatra
Mpikaroka nampiasa hazo mailaka sy ny fitantanana firaketana mba hahatakatra fisakaizana fiofanana. Ity fikarohana mitaky fiatrehana ny incompleteness ny tahirin-kevitra lehibe.
Amin'ny toe-javatra maro, mpikaroka dia tsy tsara vintana ampy nanana ny zavatra rehetra izay te ho azy nanangona amin'ny toerana iray. Roa mahazatra dia tsy feno olana vaovao momba ny olona sy ny mismatch eo teorika constructs sy ny tahirin-kevitra. Samy ireo olana dia niantso ny Kossinets sy Watts (2009) ho isan'ny ny ezaka mba hahatakatra ny fomba tambajotra sosialy nivoatra.
Manodidina miteny, mpikaroka mihevitra fa fivoaran'ny tambajotra sosialy no entin'ny endri-javatra telo: 1) ny rafitry ny-misy fifandraisana 2) nizara asa atao (ohatra, dorms, kilasy) ary 3) Ny Mponina. Ny fahatakarana ny interrelationships eo amin'ny lafin-javatra telo ireo dia mitaky longitudinal tambajotra rakitra miaraka vaovao momba ny olona "Ny Mponina sy ny fiaraha-mientana. Nanana fampianarana teo aloha ny sasany amin'ireo lafin-javatra, nefa tsy nisy nanana telo.
Kossinets sy Watts nanomboka ny fikarohana amin'ny alalan'ny nahazo ny mailaka hazo avy amin'ny anjerimanontolo lehibe. Na izany aza, ireo hazo mailaka ihany dia tsy feno, tsy ahitana ny zava-drehetra ilaina mba hahatakatra ny antony isan-karazany mitondra fiara Network ny evolisiona. Noho izany, Kossinets sy Watts natambatra ireo hazo mailaka, roa loharanom-baovao hafa: isan'ny mponina vaovao voaangona avy amin'ny anjerimanontolo sy ny vaovao momba ny nizara asa atao (ohatra, mpianatra fonenana vaovao sy ny lisitra feno ny fisoratana anarana amin'ny taranja). Raha vao telo ireo loharanom-baovao, ny tsirairay avy izay tsy feno, dia natambatra niara-Kossinets sy Watts nanana rafitra ho an'ny angon-drakitra mahery fahalalana Network ny evolisiona.
Kanefa, nisy zava-tsarotra iray farany fa tsy maintsy mandresy. Kossinets sy Watts naniry hianatra ny fomba tambajotra sosialy ao amin'io oniversite nivoatra ka nila ny fomba mampiasa ny mailaka hazo ho Mpandanja ny izay mifandray amin'ny izay amin'ny izay fotoana. Araka ny noresahina ao amin'ny teo aloha (sampana 2.3.2.1), ity karazana operationalization ny teorika constructs dia fanamby lehibe, rehefa mampiasa nomerika ho an'ny fiaraha-monina soritra fikarohana. Tamin'ny farany, Kossinets sy Watts nanapa-kevitra fa olona roa noheverina mifandray amin'ny fotoana \_ (T \_) raha toa ka raha efa nifanakalo mailaka (\_ (i \_) Nanoratra e-mail \_ (J \_) sy ny \_ (J \_) Nanoratra e-mail \_ ( I \_)) ao amin'ny teo aloha 60 andro. Ireo safidy tsy jadona; dia miorina amin'ny dinihina tsara empirical ity toerana, sy Kossinets sy Watts homarinana avy amin'ny teny fa ny vokatra dia matanjaka ireo safidy. Amin'ny ankapobeny, raha ny operationalization Tafiditra misafidy manokana ny sasany cutoffs-milaza fa tsy 60 andro 30 andro na 90 andro-dia hevitra tsara mba ho azo antoka fa ny vokatra dia tsy mora ny safidy ity.
Raha vao Kossinets sy Watts niresaka ny olana nateraky ny incompleteness (ohatra, tsy hita isan'ny mponina vaovao, tsy hita vaovao momba nizara ny asa, ary tsy ampy teorika constructs), dia nisy tahirin-kevitra izay nanampy azy ireo hahatakatra ny telo lehibe hery izay afaka hitondra fiara tambajotra evolisiona: 1) ny rafitry ny efa misy fifandraisana 2) nizara asa atao (ohatra, dorms, kilasy) ary 3) ny Mponina. Mifanaraka amin'ny fikarohana teo aloha, dia hita fa ny olona mitovy Mponina dia azo inoana kokoa mba hanangana fifandraisana. Na izany aza, tsy toy ny teo aloha ny fianarana, dia hita fa modely io no mafy mitigated ny rafitra efa misy tambajotra sy nizara asa. Amin'ny teny hafa, ny endrika izay efa nahita mpikaroka aloha dia ampahany Nanazava ny tahirin-kevitra teo aloha mpikaroka fa tsy nanana. Araka izany, amin'ny alalan'ny nahomby fiatrehana ny incompleteness ny tahirin-kevitra, Kossinets sy Watts dia afaka manazava ny fifandraisana ny samy hafa isan-karazany ny lafin-javatra izay hitondra fiara tambajotra sosialy fiovana.